Soosaarka Mashiinka Aluminium Aluminium ee Warshad iyo Warshad | Jiashun
Mashiinka aluminium ee aluminiumka ah ee la isku qurxiyo ayaa qaata tiknoolajiyada casriga ah ee isku dhafan. Dusha sare ee bireedka aluminiumku waa mid siman oo fidsan, iftiinka iftiinka waa mid sarreeya, dhererka dhererka dhererka iyo jiifka ayaa weyn
Mashiinka aluminium ee aluminiumka ah ee la isku qurxiyo ayaa qaata tiknoolajiyada casriga ah ee isku dhafan. Dusha sare ee bireedka aluminiumku waa mid siman oo fidsan, iftiinka iftiinka waa mid sarreeya, dhererka dhererka dhererka iyo jiifka waa weyn yahay, marinka hawadu lama marin karo, waxqabadka xiritaanka ayaa wanaagsan, iyo waxqabadka ka hortagga daxalka ayaa si weyn loo hagaajiyay: dusha sare ee aluminium-ka aluminium ee dharka fiber galaaska si weyn ayaa loo hagaajiyay ka dib markii daaweyn gaar ah anti-daxalka daaweyn. Isla mar ahaantaana, koollo hawo kulul oo polyetylen ah ayaa loo isticmaalaa si looga fogaado suurta galnimada wasakhda iyo caaryada dusha sare ee aluminium aluminium ee ay sababtay qoyaanka ama dareeraha. Tooska isku-darka cadaadiska kulul ayaa badbaadin kara xabagta isku-dhafan iyo qiimaha isku-darka dahaarka. Saamaynta qoyaanka ayaa yar oo saamaynta ka hortagga qoyaanka ayaa la xoojiyay: lakabka kuleylka kuleylka ah ee polyetylenka dhejiska ah ee dhejiska muraayadda aluminium aluminium ayaa ka sii dhumuc weyn tan guud, iyo uumiga uumiga biyaha ayaa ka yar. Sidaa darteed, saameynta ka hortagga qoyaanka ayaa ka wanaagsan oo qalabka dahaarka sida dhogorta quraaradda si kalsooni leh ayaa loo ilaaliyaa.
CULAYS (g / m2)
Aluminium aluminium ah oo la marsiiyey maro adag oo muraayad ah oo ah muraayad fiber muraayad ah waxay leeyihiin astaamaha dusha sare, iftiinka iftiinka sare, biyo-caddeyn, hawo-mareenka iyo shaabadda.Waxaa badanaa loo isticmaalaa daboolka daboolka daboola iyo lakabka uumiga uumiga uumiga ee uumiga, hawada sare, wadada, dhogor galaas ah , dhogorta dhagaxa ah, dhogorta macdanta iyo caagga caagga lagu dahaadho.
1. Iska caabinta daxalka ayaa si weyn loo kordhiyay
2. uumiga uumiga biyuhu wuu yaryahay, wuxuu xoojiyaa uumiga uumiga biyaha
1. Qalabka daboolka kululaynta 'daboolida daboolida lakabkeeda iyo lakabka uumiga uumiga biyaha ee dhogorta dhalada ah, dhogorta dhagaxa ah, caagga iyo alaabada caagga ah iyo wixii la mid ah
2. Nidaamka kuleylka kuleylka iyo uumiga uumiga ee tubbada biyaha diiran iyo qabow iyo shuruudaha kuleylka kululeynta dhismaha.
Ogaysiis: Xabagta aluminium alwaaxa maro fiberglass waa dabiici. Haddii heerkulku ka bato 80 digrii, xabagta ayaa isbeddelaysa, aluminium-ka iyo marada ayaa kala soocaya.
1.Ma tahay ganacsade ama waxsoosaar?
J: Waxaan nahay soo saare, waxaan leenahay warshad gaar ah iyo 6 khad oo wax soo saar ah
2.Waa maxay waqtiga dhalmada?
J: Ilaa 2-15 maalmood kadib markii aan helnay deebaajiga.
3.Ma bixin kartaa muunad?
J: Haa, waanu soo bandhigi karnaa muunad, tijaabooyinka qaarkoodna waa bilaash, laakiin waxaan qaadi doonnaa kharashka dhoofinta.
4. Miyaad ku bixin kartaa xawaare ahaan?
J: Haa, waxaan ku geyn karnaa markab xawli ku socda, bad ama hawo.
5.Waa maxay habab bixintaada?
J: Shuruudaha lacag bixinta: T / T 30% -50% dhigaalka ka dib amarka ayaa xaqiijinaya, dheelitirka ka dib alaabada oo diyaar ah ka hor inta aan la dirin ama L / C, ama Western Union qaddar yar.
Hore: Liquid silikoon maro dahaarka leh
Xiga: maro silig ah oo heer sare ah